မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: June 2008 “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
ဒီပဲယင်း ကဗျာကြောင့် ချယ်ရီ အယ်ဒီတာ နုတ်ထွက်ရ
ကိုစိုး ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၀၈
မြန်မာပြည်တွင်း၌ ထုတ်ဝေနေသော ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်း ၂၀၀၈ ခု ဇွန်လထုတ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကဗျာ တပုဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ စာပေစိစစ်ရေးမူဝါဒနှင့် ငြိစွန်းသည်ဟုဆိုကာ သက်ဆိုင်ရာက မဂ္ဂဇင်းမှ အယ်ဒီတာ တဦး ကို နုတ် ထွက်စေခဲ့ပြီး အယ်ဒီတာ အဖွဲ့အသစ်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းစေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“စိစစ်ရေးက ဇွန်လထဲကျမှ သိပြီး အယ်ဒီတာအဖွဲ့ကို ခေါ်ကျပ်တာ၊ ဒါပေမယ့် မဂ္ဂဇင်းကိုပြန်သိမ်းလို့တော့ မရတော့ဘူး၊ ပျံ့ကုန်ပြီ၊ အခုက အယ်ဒီတာအသစ်ပြောင်းဖွဲ့ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာကိုတင်ထားတယ်၊ အဲဒါ ပြန်တော့ မကျသေးဘူး၊ အယ်ဒီတာ ကိုဌေးအောင်ကတော့ နားလိုက်ရတယ်၊ ကဗျာ ဆရာအခြေအနေက အခု အချိန်အထိတော့ ဘာမှထူးထူး ခြားခြား မရှိသေးပါဘူး”ဟု ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
ယင်း ဒီပဲယင်း အကြောင်း ဖွဲ့ဆိုထားသော ကဗျာတွင် မုံရွာ-ရေဦး သွား ကားလမ်းပေါ်ရှိ ဒီပရင်္ဂမြို့သည် လွန်ခဲ့သော နှစ် ၇၀၀ ကျော် အလောင်းစည်သူမင်း ခေတ်ကပင် အမှန်တကယ်ရှိခဲ့သည့် သမိုင်းဝင် မြို့တမြို့ ဖြစ်ပြီး သာသနိက အဆောက် အအုံများနှင့် အရှင်အဂ္ဂသမာဓိ၊ အရှင်ဝံသ၊ အရှင် ယသ၊ ဆရာတော် အရှင်ဇိန၊ လယ်တီဆရာတော်၊ အယူတော်မင်္ဂလာ ဦးနိုး၊ ပတိမ်မင်းသား စသည့် ရဟန်းပညာရှိ၊ လူပညာရှိ အကျော်အမော် များ ခိုလှုံ ထွက်ပေါ်ရာ ဒေသဖြစ်ကြောင်းတို့ ပါဝင်သည်။
ပြည်ပအသံလွှင့် ရေဒီယိုများ ရဲအဖွဲ့နားထောင်
မိုးအောင်တင် | ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၀၈
စစ်အစိုးရက ဘီဘီစီ၊ ဗီအိုအေ အစရှိသည့် ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာနများအား သတင်းအမှားများ လိမ်ညာထုတ်လွှင့်နေပြီး တိုင်းပြည်ပျက်ရန်ပြုလုပ်နေသည်ဟု စွပ်စွဲမှုများ ပြုလုပ်နေသော်လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုမူ ယင်း အသံလွှင့် ဌာနများကို နားထောင်ရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပြောသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ သံဃာတော်များ ဦးဆောင်သည့် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမဖြစ်ခင် ၎င်းတို့၏ အထက်အရာရှိ များက ဘီဘီစီ၊ ဗီအိုအေ အစရှိသည့် ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာနများကို နားမထောင်ရဟု အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော်လည်း စက်တင်ဘာနောက်ပိုင်းတွင် နားထောင်ရန် အမိန့်ပြောင်းထုတ်ထားသည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦး က ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့မှ ထင်ရှားသော ဘုရားတဆူ ဖြစ်သည့် ကျောက်တော်ကြီး ဘုရားတွင် လုံခြုံရေးတာဝန်ကျနေသည့် ရဲတပ်ကြပ် ကြီးတဦးကလည်း အလုပ်တာဝန်တခုအနေနှင့် ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာနများကို နားထောင်နေရကြောင်း ပြောပြသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံ အရပ်သားတဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါအရပ်သားက “ဘာလို့ နားထောင်သလဲလို့ သူ့ကိုမေးကြည့်တော့ နအဖ အစိုးရကလည်း သတင်းမှန် အားလုံးကို မပြောဘူး၊ အဲဒါကြောင့် ဘီဘီစီ၊ ဗီအိုအေ၊ အာရ်အက်ဖ်အေ စတာတွေ နားထောင်ရတာတဲ့၊ အဲဒီလိုနားထောင်မှ ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ ဆိုတာသိရပြီး နောက်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဘာပြင်ဆင်ထားရမယ်ဆိုတာ သိနိုင်မယ်လို့ ကျနော့်ကို ပြောပြတယ်” ဟုဆိုသည်။
ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သူတဦးကမူ ပြည်ပရေဒီယိုများတွင်ပါရှိသော သတင်းများအရ နောက်ကလိုက်၍ အရေးယူရန် ရဲတပ်ဖွဲ့က ယခုကဲ့သို့ ရေဒီယို သတင်းများကို နားထောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုသည်။
“သူတို့ရဲတွေလည်း ဘာမှ အကြံဥာဏ် ရှိလို့မဟုတ်ဘူး၊ မြန်မာဘာသာနဲ့လွှင့်တဲ့ ပြည်ပရေဒီယိုသတင်း နားထောင်ပြီးတော့ အဲဒီနောက်ကိုလိုက်ပြီး အရေးယူဖို့ လုပ်စရာရှိတာ လုပ်နေကြတာလို့ ထုတ်ပြောတယ်”ဟု သတင်းတပ်ဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သူက ဆိုသည်။
နအဖ စစ်အစိုးရသည် ပြည်ပမီဒီယာများဖြစ်သည့် ရေဒီယို၊ အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုက်နှင့် ဂြိုဟ်တု ရုပ်သံများမှ ကြေညာ ဖေါ်ပြလျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းများပေါ်တွင် အခြေခံကာ တုံ့ပြန်ခြင်း၊ အရေးယူ ဆောင်ရွက် ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းလည်း ရဲအရာရှိတချို့က ပြောဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်ကျော်ကတည်းက ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဆန်းက မီဒီယာကိုမီဒီယာနှင့် တိုက်ရမည် ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်ကို လူသိရှင်ကြားကြေညာခဲ့ပြီး ပြည်ပမီဒီယာများမှဖေါ်ပြသည့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သော ရေးသား ပြောဆိုချက်များကို ပြန်လည် ချေဖျက်သည့် သတင်းများအား အစိုးရမီဒီယာနှင့် ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာများတွင် ရေးသားဖေါ်ပြရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင် အပတ်စဉ် ဂျာနယ်များတွင်လည်း အစိုးရအာဘော် သတင်း ဆောင်းပါး များကို စာပေစိစစ်ရေးမှ ခွဲတမ်းချပေးပြီး မထည့်မနေရ ထည့်သွင်းဖေါ်ပြစေသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း လပွတ္တာမြို့မှ ဒုက္ခသည်များကို နေရပ်ရွာများသို့ အတင်းပြန်စေသည်ဆိုသည့် သတင်းများ ပြည်ပသတင်း ဌာနများတွင် ဖေါ်ပြပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပင် စစ်အစိုးရ သတင်းစာက လပွတ္တာမြို့ရှိဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဒုက္ခသည်များနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည့် သတင်းဆောင်းပါးကို ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
ထို့အတူ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသည့် ဧရာဝတီတိုင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းကွမ်းခြံကုန်း ကော့မှူးမြို့နယ်များမှ လယ်သမားများ ကျွဲနွား၊ လယ်ထွန်စက်နှင့် မျိုးစပါးမရှိ၍ အခက်ကြုံနေရသည်ဆိုသော သတင်းများ ပြည်ပမီဒီယာများ တွင်ဖေါ်ပြခဲ့ပြီးသည့်နောက် အစိုးရ တီဗီနှင့် သတင်းစာများတွင် လယ်ထွန်စက်၊ မျိုးစပါး၊ ကျွဲ နွားများကို နိုင်ငံတော်က ထောက်ပံ့ပေးနေသည့် ပုံများ ဖော်ပြသည်။
လေဘေးသင့် ရန်ကုန်တိုင်း ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်ထဲမှ ကျေးရွာများသို့ သွားရောက် ကူညီလျက်ရှိသူ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတဦး ကမူ နအဖ အစိုးရသတင်းစာနှင့် မီဒီယာများတွင် ဖေါ်ပြသည့် ပံ့ပိုးကူညီမှုများမှာ အပြသဘောမျှသာဖြစ်ပြီး ဒုက္ခသည် အများစုမှာ အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့နေရဆဲဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
“ရန်ကုန်ကနေ ဒေးဒရဲ ဖျာပုံဘက်သွားရင် ကော့မှူးမြို့အ၀င်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ အ၀င်နဲ့ မြို့အထွက် ကားလမ်းဘေးက လယ်တွေလောက်ပဲ ထွန်စက်နဲ့ထွန်တာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒီနောက် အတွင်းပိုင်းကျတဲ့ လယ်တွေကျတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် ထွန်နိုင်ရင်ထွန် မထွန်နိုင်ရင်တော့ ဒီအတိုင်း မြက်ပင်တွေနဲ့ စိမ်းနေသေးတာပဲ တွေ့ရတယ်”ဟု အဆိုပါ စေတနာ့ ၀န်ထမ်း ဆောင်ရွက်သူက ပြောသည်။
ပြည်ပ အသံလွှင့်ဌာနများ၏ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းများကို နေ့စဉ်နားထောင်နေသူ ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက လည်း “အစိုးရ သတင်းစာ၊ ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားအားလုံးဟာ ပြည်ပ မီဒီယာတွေက ဖေါ်ပြ၊ လွှင့်ထုတ်သွားတာတွေကို နေ့တိုင်း ပြန်ပြီးရှင်းနေသလိုပဲ ခံစားရတယ်။ ဥပမာ ဧရာဝတီတိုင်း ဒုက္ခသည်စခန်းတွေနဲ့ ရွာတွေမှာ ၀မ်းရောဂါတွေ ဖြစ်ဖို့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ သတင်းဖေါ်ပြပြီး မကြာခင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆရာဝန်တွေ သင်္ဘောနဲ့ ဆေးကုသပေးနေကြောင်း အစိုးရ သတင်းတွေမှာ ဖေါ်ပြတော့တာပဲ ”ဟု ပြောဆိုသည်။
ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ တားဆီးနေခြင်းကို ၀မ်းနည်းကြောင်း အမေရိကန်ပြောဆို
ဉာဏ်မောင်။ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၀၈
စစ်အစိုးရအနေဖြင့် မုန်တိုင်းသင့်ပြည်သူများအတွက် နိုင်ငံတကာအကူအညီများကို တားဆီးပိတ်ပင်နေသည့် အတွက် အလွန်ဝမ်းနည်း ကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်က ပြောဆိုလိုက် သည်။
မြေငလျှင်ဒဏ်ခံခဲ့ရသည့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိစဉ် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ယမန် နေ့တွင် ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အိမ်နီးချင်းဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံသို့
ယမန်နေ့ကရောက်ရှိခဲ့သည့် မစ္စရိုက်က မြန်မာစစ်အစိုးရအား ရည်ရွယ်ပြောဆိုခဲ့ရာ “သူတို့ ပြည်သူတွေအတွက် နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေကို ဖြစ်နိုင်သမျှ လက်ခံရမဲ့အစား ကယ်ဆယ် အကူအညီပေးမဲ့သူတွေကို တားဆီးပိတ်ပင်နေတာကတော့ အလွန်ကို ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းပါ တယ်”ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
ယခုနှစ်မေလ (၁၂) ရက်နေ့က တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပြင်းထန်သော မြေငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် ယခုအချိန်ထိ သေဆုံးသူ (၈၀,၀၀၀) နီးပါးရှိလာနေပြီဖြစ်ပြီး လူသန်းပေါင်းများစွာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မေလ (၂) ရက်နေ့က တိုက်ခတ်ခဲ့သော နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် လူ (၈၄,၅၀၀) သေဆုံးပြီး သန်းနှင့်ချီသော ပြည်သူများ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ချိန်တွင် စစ်အစိုးရက နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့များကို နိုင်ငံတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့ပေ။
ယခုအချိန်အထိ လေဘေးသင့်ပြည်သူများမှာ အစားအသောက်နှင့် သောက်ရေသန့်ရရှိနိုင်ရေး အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့နေရပြီး လေဘေးဒုက္ခသည်များအား သွားရောက်ကူညီသူအချို့ကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ခြင်းများကို ယခုတိုင်ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရအနေဖြင့် မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးနောက် လေဘေးသင့်သူများအား အကူအညီပေးရန် မြန်မာ့ရေပိုင်နက်အနီးသို့ ရောက်ရှိလာသည့် အမေရိကန်နှင့် ပြင်သစ်စစ်သင်္ဘောများကို ဝင်ရောက်ခွင့်မပေးခဲ့သဖြင့် အမေရိကန်၏ ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
ဆားဈေး (၆)ဆကျော် မြှင့်တက်သွား
ရိုးမ ၃။ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၀၈
နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့် စပါးစိုက်ပျိုးသည့် လယ်များသာမက ဆားကွင်းများပါ ပျက်စီး သွားသည့်အတွက် ဆားဈေးများ အဆမတန်တက်သွားသည်ဟု ဆိုသည်။
ယခင် ဆားဈေးထက် (၆) ဆကျော် မြင့်တက်သွားသည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့မှ အိမ်ရှင်မ တဦးက ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
“အရင်က ဆားတပိဿာကို (၂၀၀) ဘဲပေးရတယ်၊ အခု(၁,၃၀၀) ဖြစ်နေတယ်၊ မုန်တိုင်းဖြစ်ပြီး အဲလိုတွေ တက်သွားတာ၊ ဆားတခုတည်းတော့ မဟုတ်ဘူး အစစအရာရာ အကုန်ဈေးတက် ကုန်တာ” ဟုပြောသည်။
မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် အစိုးရပိုင်ဆားကွင်း ဧက (၁,၀၀၀)ကျော် ပျက်စီးခဲ့ပြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဆားကွင်း (၂၃,၄၃၀) ဧကခန့် ပျက်စီးခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ယခင်က ဆားတပိဿာလျှင် (၁၀၀) ကျပ်ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ (၄၀၀) ကျပ်ဖြင့် ပေးဝယ်နေရသည့်အပြင် ရရှိရန်ပင် ရှားပါးနေလျှက်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
မုန်တိုင်းတိုက်ခက်ပြီးနောက်ပိုင်း ကုန်ဈေးနှုန်းများ အဆမတန် မြှင့်တက်သွားသည့်အပြင် အလုပ်ကိုင်ရှားပါးမှု ပြဿနာမှာလည်း ပိုမိုဆိုးရွားလာသည်ဟု ဆိုသည်။
“လယ်သမားတွေလည်း လယ်တွေပျက်သွားတော့ ဘယ်က ဘယ်လိုပြန်စရမယ်မှန်းမသိတော့ ဘူး၊ ဆားကွင်းတွေရော အကုန်ပျက်၊ အားလုံး အလုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်နေတယ်လေ၊ ဆားကွင်း ပျက်တော့ အလုပ်မရှိ၊ ငါးဖမ်းလှေတွေ ပျက်စီးသွားတော့ အလုပ်တွေမရှိ အဲလိုဖြစ်နေကြတာ” ဟု လပွတ္တာမြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
ထို့အပြင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းရှင်များ ဦးဆောင်၍ငါးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ငါးလုပ်ငန်းများ ပြည်လည်တည် ဆောက်ရေး ကြီးကြပ်မှုကော်မတီကို ဇွန်လ (၂၆) ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။
NCGUB ၏ ကျေညာချက်
Posted by အာဇာနည် at 10:42 PM0comments
လူသားစားတဲ့ ဘောဓိ သာရ..များ..
China is on its way to becomingaWorld-Class Super Power Nation and the 8-8-08 Olympics is one of the many ways it is showing off. As downtrodden people from Burma, we need to be aware of the dangers of living next to this awakening Super Giant.
“There isatrend in Kwang Dong Province of eating human baby herbal soup in order to increase sexual power and improve health. It costs 4000 Chinese yuan (about US $580) butafactory manager, 62 years old, swears it is worth it. It is made by eight hours of steaming and boiling the baby with expensive herbs and chicken and he eats it frequently asacustomer in this particular restaurant. He pointed to his second wife, only 19 years old, and claims it is suchapotent aphrodisiac they are able to have sex every day.
The reporter commented that the reason for this state of affairs is because: _
1. Chinese people pay too much attention to their health.
2. The government introduced the one-child-per-family policy.
That is to say, most couples prefer to have boys so couples who have female babies abort them and health faddists buy them for their sexual and general health.
—end of the retranslation—
Did you haveafeeling of nausea, or did you actually vomit looking at the pictures and reading the article? Did you haveasense of evil, an unspeakable feeling of horror, not only for the poor baby, but also for the selling couples, customers, and the reporter himself who overdid himself in being so “objective” in the face of such revulsive abomination? Notice how he ends with just two objective reasons: too much health-consciousness and too much one-baby-per-family government policy. He fails to talk about the utter callousness with whichagirl-baby’s life is bought, sold, and eaten. He fails to condemn this unimaginable barbarism ofaso-called Modern China.
What does this have in ramifications for our Freedom Struggle in Burma? China is hell-bent on conquering Burma but doing it very discretely through its puppet generals Than Shwe and the rest of the SPDC. 75 year-old Than Shwe himself isacannibal who has eaten the body ofaholy monk just to obtain superpowers, committingamultiple sacrilege, just like the 62 year-old factory manager aforementioned.
It means that Burma, already corrupted to the gutter level by SPDC, will sink even lower than the gutter when it is totally under the heel of the Chinese Neocolonial Power. We who used to bemoan the British Colonial Power, now behold the infinitely more horrible combined threat of the SPDC-plus-Chinese Masters. By observing how China has frequently supported SPDC no matter how criminally it has acted, we know how much, asanation, China is willing to do to achieve power. Possessing the natural resources of Burma, and securing the passage through Burma to the Indian Ocean isanecessary step towards becomingaWorld Power, becomingatwo-ocean naval power, just like the United States. So onanational level, China is willing to ignore the tortures and deaths of millions of people in Burma and elsewhere. We already knew that. Now, in this article, you know how, on an individual Chinese level, how unscrupulousaman can get in his quest for personal and sexual power. That is the Danger of Chinese Power. Individually, and then multipliedabillion times, nationally.
See how worthless human life is in China. See how worthless human life is in Burma.
Put the two dictatorships together and what do we get? Utter and absolute worthlessness.
I know this article is sickening. The photographs are disgusting. But instead of surfing away and forgetting all about this article, remember it. Let it sear into your brain that this, and worse than this, will happen (as if it has not already happened) in Burma. And then say to yourself, NO. NO-NO! I won’t let it happen. We won’t let it happen.
So let the horror motivate us; use the negative energy and turn it into positive energy to fight for Freedom in Burma. Fight against Chinese Domination of Burma. Fight against SPDC, Sinister Puppet Dictatorship of China. Remember 8-8-88, 26-9-07, and 3-5-08!
Posted by အာဇာနည် at 10:34 PM0comments
Executive%20Summary - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: Executive%20Summary
Posted by အာဇာနည် at 10:23 PM0comments
Myanmar residents slowly rebuilding their lives after cyclone
MYANMAR: UN reports improvement in cyclone cooperation
Foreign investment in Myanmar oil and gas sectors more than tripled last year
Myanmar: Most Foreign Invesment In Myanmar Goes Into Oil And Gas Sectors
Myanmar's New, Well-Organized, Capital City
Most foreign investment in Myanmar goes into oil and gas sectors
Myanmar's oil and gas foreign investment triples
Myanmar: Magazine Says Myanmar Salt Price Has Tripled Since Cyclone Nargis
Most foreign invesment in Myanmar goes into oil and gas sectors
RP asks Myanmar to release Suu Kyi by ASEAN anniversary
Magazine says Myanmar salt price has tripled since Cyclone Nargis
Rice uses visit to quake-affected China to rap Myanmar
'Made in Myanmar' still on shelves
Myanmar Acting On Foot-And-Mouth Disease
Victims of natural calamities in China and Myanmar supported
Rice praises China's post-quake recovery efforts
Vietnam PM plans five-nation ASEAN tour
Posted by အာဇာနည် at 10:16 PM0comments
Posted by အာဇာနည် at 10:10 PM0comments
NLD ၏ ကျေညာချက်
လူထုအသံ အွန်လိုင်းဂျာနယ်မှ ကူးယူဖော်ပြသည်
နေ့စွဲ- ၂၀၀၈ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၇ရက်နေ့ စစ်အာဏာရှင်စံနစ်တိုက်ဖျက်ရေး တော်လှန်မှုတစ်ရပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့၊ လုပ်ဆောင်ကြဖို့၊ တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့၊ စစ်အာဏာရှင်စံနစ် ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုနားလည်ထားလဲ အနည်းငယ်တင်ပြကြည့်ပါမယ်။ စံနစ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အကျယ်တပွင့်တင်ပြရရင် ပြည်သူ လူထု နားလည်နိုင်တယ်၊ အချို့တင်ပြချက်တွေကြောင့်လဲ ရှုတ်ထွေးသွားနိုင်တယ်၊ ရှင်းပြတာ နားမလည်ရင် စိတ်ပျက်သွားနိုင်တယ်၊ ဒီတော့အလွယ်ဆုံး ကျနော်တို့အင်အားစုတွေ နားလည်ထားတဲ့ ဥပမာပေးပြီး၊ လူထုလက်တွေ့ဘ၀နဲ့ အနာဂတ် မျှော်လင့်ချက်ကြား အနီးစပ် ဆုံးဖြစ်အောင် တင်ပြကြည့်ရမယ်ဆိုရင်- လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်ကြသူ တိုင်း ခံစားချက်တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောရင် ပြဿနာ ဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့ အတွေးဝင်နေကြတယ်၊ ရှင်းရှင်း နေနိုင်ရင် ချမ်းသာမှုရတယ်၊ ဒီအုပ်ချုပ်သူတွေနဲသွားပြီး မပတ်သက်ရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်၊ ကိုယ်နှင့် မဆိုင်ရင် ၀င်မပါနဲ၊ ကိုယ့်မိသားစုအရေးထက် ကျန်တာဘာမှ အရေးမကြီးဘူး၊ လွတ်မြောက်လိုချင်ရင် နိုင်ငံခြား ထွက်နိုင်အောင် ကြိုးစား၊ ဖိနှိပ်မှုကင်းချင်ရင် ကြံဖွတ် စွမ်းအားရှင်အဖြစ် ရပ်တည်ရှင်သန်လို့ရတယ်၊ အမှန်ကို ပြောနေတာလား၊ ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ၊ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေ၊ နားလည်နိုင်လောက်တဲ့ စွမ်းရည်မဲ နေကြပြီ၊ လူထုတစ်ခုလုံး အနေနဲလုံးဝမသိလို့တော့ မဟုတ်၊ တွန်းလှန်ရင် လက်ရှိ မိမိတို့ ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ ဘ၀ပျက်သွားလိမ့်မယ် စတဲ့အတွေးပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်လာအောင်၊ အကြောက်တရားအောက်မှာ လုပ်သင့်တာ လုပ်ချင်တာ မလုပ်ရဲအောင်၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးယုံကြည်ချက်တွေပျက်ပြား အောင် (ယုံကြည်မှု မရှိတော့ဘူး)၊ မိမိကိုယ်ကိုလဲ ပြည့်ဝတဲ့ယုံကြည်မှု မရှိလာအောင်၊ အသိတရားခေါင်းပါးလာအောင်၊ ကိုယ်ကျင့်တရား ဖောက်ပြန်လာအောင်၊ အမှားများများလုပ်ပြီး ဘ၀ရပ်တည် ရှင်သန်ရဲလာအောင်၊ နည်းအမျိုးမျိုးသုံးပြီး ဖိနှိပ်လိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စစ်အာဏာရှင်စံနစ်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေလို့ ခေါ်ယူလိုရပါတယ်။ (စစ်အာဏာရှင်စံနစ်ဆိုတာ အထက်ပါအခြေအနေတွေ ဖြစ်အောင်ဖန်တီး၊ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ထားတဲ့စံနစ်ပါ) နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စား တက်ကြွ သူများ ပြောနေတာတွေကို နားလည်တဲ့လူထုရှိသလို၊ နားမလည်နိုင်တဲ့ လူထုလည်း ရှိနေသေးတယ်၊ နားလည်တဲ့အဆင့်နဲရပ်နေတာကြောင့် တော်လှန်ရေးမဖြစ်သေးတာပါ၊ မဖြစ်တော့ဘူးလို့ ပြောမရပါဘူး၊ သို့သော်ယောင်လည်လည်ဦးဆောင်မှု လှုပ်ဆော်မှု ဟန်ပြစည်းရုံးရေး၊ ပါတီအနိုင်ရရှိရေး၊ အာဏာ တည်ဆောက်ရေး၊ စီမံချက်(ကိန်း) ဆက်လက်ရရှိရေး၊ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ တင်ပြသုံးသပ်ရေး၊ နေရာ-ရာထူး တည်မြဲရေး၊ လွမ်းမိုးချယ်လည်ရေး၊ စတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေနဲ တော်လှန်ရေးတစ်ရပ်ဖန်တီးလို့ မရပါဘူး။ ယနေ့ တော်လှန်ရမှာက စစ်အာဏာရှင်တို့ဖန်းတီးခဲတဲ့ လုပ်ရပ်၊ တည်ဆောက်ပေးခဲတဲ့ လွဲမှားတဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ ဖောက်ပြန်တဲ့ အကျင့်စာရိတ္တတွေကိုဦးစွာတော်လှန်ရမှာဖြစ်တယ်၊ ဒါကလူပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ခိုက်တော်လှန်ရေးမဟုတ်၊မိမိနဲမိမိပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ဦးစွာစတင်ပြီး မှန်ကန်အောင် လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်၊ တော်လှန်ရေး တစ်ရပ်ဖန်တီးရမှာဖြစ်တယ်၊ လူထု ၅၅သန်းကျော် အားလုံးပါဝင် လာ အောင် စည်းရုံးသိမ်းသွင်း တည်ဆောက်မှ စစ်အာဏာရှင် စံနစ်ကိုတွန်းလှန်နိုင်မယ်လို့ ခံယူထားရင် တော့မှား လိမ့်မယ်။ ယနေ့အချိန်အခါ အခြေအနေ၊ လူအင်အား၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ပါတ်ဝန်းကျင်၊ လက်ခံနိုင်မှု၊ ပါဝင်နိုင်မှု၊ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အမျိုးမျိုးအကြံ ပေးနေကြသလို၊ နည်းနားပေါင်းများစွာ လေ့လာရင်း အချိန်ကုန်မနေကြဖို့လဲလိုပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံတွေ၊ တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြား ဆွေးနွေးတိုင်ပင် စည်းဝေးဆုံးဖြတ် ချမှတ်တည်ဆောက် ခဲတဲ့လမ်းစဉ်တွေ၊ ခေါင်းဆောင်ကြီးများစွာ ခေါ်ယူကျင်းပခဲတဲ့ညီလာခံတွေ၊ ရေးဆွဲခဲကြတဲ စီမံကိန်း၊ လှုပ်ရှားမှု၊ လုပ်ငန်း စဉ်တွေ၊ နိုင်ငံတစ်ကာအသိုင်းအ၀န်းမှာ လိုက်လံစည်းရုံး လှုပ်ဆော်ခဲတဲ့ အလုပ်အဖွဲတွေ၊ ယနေ့ထက်တိုင် ထောက်ပံကူညီ ပန့်ပိုးနေတဲ့ အသင်းအဖွဲ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိနေလျက်နဲ နအဖဘာကြောင့် ဆက်လက်ရှင်သန် ဖိနှိပ် အုပ်ချုပ်နေရတာလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ၊ တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားနေသူတွေ၊ ပါတီဝင်တွေ၊ တိုင်းရင်းသား ခေါင်ဆောင်ကြီးများနဲ မိသားစုဝင်တွေ၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ လူထုလူတန်းစား အလွှာ အသီးသီးက မိဘပြည်သူတွေ၊ ကျောင်းသူ-သားတွေ၊ အခြေခံ နေစားအလုပ်သမားတွေ၊ တပ်မတော်သားတွေ၊ ကြံဖွတ်၊ စွမ်းအားရှင် အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေ၊ စီးပွားရေးသမားတွေ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာဝန်ထမ်း၊ ဆရာ-ဆရာမ တွေ၊ လက်ရှိနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ် ဂဃနဏသိကြလား၊ သိဖို့အခြေအနေပေးလား၊ နိုင်ငံသူ-သားတိုင်း သိရင်ကောင်းတယ်၊ သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲရှိတယ်၊ မသိဘဲနဲ့ တော်လှန်ရေးထဲ မပါနိုင်ဘူးလား၊ သေချာတာကတော့ တော်လှန်သူ၊ ရဲရင့်သူတွေ၊ ရှိရင် တော်လှန်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ညီညွတ်ကြ စည်းရုံးကြ တော်လှန်ကြ တိုက်ပွဲဝင်ကြလို့ ပြောခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ နအဖ အကျဉ်းစခန်းထဲ ချုပ်နှောင်မှု ခံထားကြရတယ်၊ အဲဒါစုစုပေါင်း ၂၀၀၀ကျော်သော ဆန့်ကျင်ရဲသူတွေသာဖြစ်တယ်၊ ကျန်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ ကတော့ ပေါ့ပါးတဲ့တာဝန်ယူမှုတွေနဲ ကျေနပ်နေကြတယ်၊ ဒါကြောင့် တော်လှန်ရေး မဖြစ်တာဆိုပြီး လက်ခံထားသူတွေ ရှိနေပြီ၊ နယ်စပ်နဲနိုင်ငံတစ်ကာမှာရောက်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင် တိုက် ဖျက် ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး၊ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှု လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ အမည်ခံခေါင်းဆောင်တွေ၊ အမည်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါလား၊ အကျဉ်းကျနေတဲ့ မျိုးဆက်လူငယ်တွေရဲ ပြတ်သားတဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ရဲတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲစွမ်းအား လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေကိုကြည့်ပြီး အားရ၊ ဂုဏ်ပြု နေယုံတင်မဟုတ်၊ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်ရဲတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာအောင် ဘာလို့ မလုပ်တာလဲ မတည်ဆောက် ကြတော့ဘူးလား၊ ဒီတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ လူထုကိုဘာလုပ်လိုက် ညာလုပ်လိုက်လို့ ပြောနေတာ၊ (သို့) ပြည်ပမှာ မှေးနေပြီး၊ အာသာပြေနိုင်ငံ့အရေး လုပ်ပေးနေတာလောက်နဲ၊ နအဖ စစ်အစိုးရမပြုတ်ကျနိုင်ဘူးလို နားလည်ဖို့ အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ "စစ်အာဏာရှင်စံနစ်ကိုလူထုအားနဲအမြစ်ပြတ်တော်လှန်ကြလို့" ပြောခဲကြတဲ့ ၈၈မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင် ကိုဌေးကြွယ်တို့ ထောင်ထဲရပ်တည်နေခြင်းဟာ စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးနဲအမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အတွက်ဖြစ်တယ်။ လှိုင်းတစ်ခုလို မြစ်တစင်းလို တော်လှန်လာမယ့် လူငယ်တွေရှိနေပါတယ်၊ ကန့်လန့်လုပ်ပြီး စောင့်ဆွဲနေတဲ့ ဟန်ပြနိုင်ငံရေး လုပ်နေသူများ ရပ်တန်းကရပ်ဖို့ သင့်ပါတယ်။ ယောင်တောင်တောင်ပြောနေကြယုံနဲ စစ်အာဏာရှင်အမြစ်မပြတ်၊ ပြတ်သားတဲ့ လုပ်ဆောင်မှု လူထုရှေ့ရပ်တည် ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ တော်လှန်ရဲသူတွေနဲ့သာ တိုင်းပြည်ကို လားရာကောင်းတဲ့ ပြောင်းလဲမှုဆီ သယ်ဆောင် သွားနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ဘယ်လို လူထုပါဝင်လာအောင် ရှင်းပြရမှာလဲ၊ အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ လူထုကိုရှင်းရမှာက - စစ်အာဏာရှင် စံနစ်အမြစ်ပြတ်တွန်းလှန်ပြီးရင်၊ မိဘပြည်သူလူထုရရှိမယ့် လက်တွေ့ရလဒ်ကတော့ နိုင်ငံသားတိုင်း အလုပ်ရရှိမယ် (မိမိစွမ်းရည်၊ပညာ၊လုပ်ဆောင်မှု၊တပ်ကျွမ်းမှုနဲထိုက်တန်တဲ့)၊ ၀င်ငွေနဲ့ မျှတတဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စံနစ်ရှိစေရမယ်၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအတွက် လူမှု အထောက် အကူပြုစံနစ် ရှိစေရမယ်၊ ဒီတော့ လတ်တလော အကျိုးခံစားရမှာကလူထုဖြစ်တယ်၊ (ဘယ်ပါတီဝင်၊ ဘယ်အဖွဲဝင်မှမဟုတ်ပါဘူး) အမုန်းဒေါသဖြစ်နေရတဲ့ လူထု၊ အကြောက်တရားနဲအသက်ရှင်သန်ခဲ့ရတဲ့ လူထု၊ လွတ်လပ် မှု-တရားမျှတမှုမဲ့နေခဲ့ရတဲ့ လူထုဘ၀တွေကနေ လွတ်မြောက်ကြဖို့ တော်လှန်ရေးကို ရက် (၉၀)အတွင်း အကောင် အထည် ဖော်မှာဖြစ်တယ်။ ပြည်သူလူတစ်ရပ်လုံးပါဝင်တဲ့ စစ်အာဏာရှင် ပြုတ်ကျရေး၊ လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှု ငါတို့ အင်အားစုတွေနဲ့အတူ - ရက်၉၀အတွင်း တိုက်ပွဲပြင်ကြ၊ တိုက်ပွဲဝင်ကြ၊ စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျသည်အထိ ငါတို့ အသက်စွန့် ဘ၀ပေး တော်လှန် တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုတာ ဂတိပြုလိုက်တယ်၊ တိုက်ပွဲဝင်ရန် တော်လှန်ရန် ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။ လူငယ်စုများ၊ ကျောင်းသူ-သားများ၊ တော်လှန်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် - အနုနည်း၊ နှလုံးရည်စွမ်းအား၊ အဓိကထားပြီးလုပ်ဆောင်ရမယ်။ - ပြည်သူလူထုကြား တည်တည်ကြည်ကြည် ရဲရဲဝင့်ဝင့် ရပ်တည်ရှင်းလင်းရမယ်။ - လူထုပါဝင်ရမယ့်အနေအထားသေချာ နားလည်သည်အထိ ဆွေးနွေးရမယ်။ - အစိုးရရုံး၊ ရဲဌာန၊ နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အဦးတွေက လူထုအုပ်ချုပ်ရေးဌာနနေတွေဖြစ်ရမယ်။ - ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေက ထောက်ပံရေးဌာနတွေဖြစ်ရမယ်။ - စာသင်ကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်၊ အလုပ်ရုံ၊ စက်ရုံတွေက တော်လှန်သူစုရုံးရာဌာနတွေဖြစ်ရမယ်။ - အမျိုးသမီးထုနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုနိုင်ငံသူ-သားတွေက၀ိုင်းရံအင်အားဖြစ်ရမယ်။ - လမ်း၊ တံတားတွေပေါ်မှာ တော်လှန်လူထုကြီး ပြည့်နှက်နေရမယ်။ (ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်သောနေ့တစ်ရက်သာ) - ဖိနှိပ်သူတို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်သွားရမယ်။ (ကြေငြာရပ်တန့်သောနေ့ရက်သာ) - နယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီတွေ မြို့ရွာတိုင်းမှာဖွဲစည်းရမယ်။ - သံဃာတော်တွေရဲ့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှုကို လူထုကလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်။ - နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုမှုထက် တော်လှန်ရေးအသွင်ဆောင်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ရမယ်။ - အမျိုးသားရေးဦးဆောင်မှုအသွင်တစ်ရပ်ဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ရမယ်။ - ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲစည်းရမယ်။ (တော်လှန်ဦးဆောင်သူ၊ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်၊ တိုင်းရင်းသား၊ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်အချို့ပါဝင်တဲ့) - နိုင်ငံတစ်ကာငြိမ်ချမ်းရေးတပ်တွေလိုအပ်ရင် ခေါ်ဆောင်ရမယ်။ - ဘုရားသား(ရဟန်းသံဃာများ)၊ တပ်မတော်သား(စစ်သားများ)၊ ကျောင်းသား(လူငယ်-ကျောင်းသူ-သားများ) ဦးဆောင်မှုဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ကာ စစ်အာဏာရှင်စံနစ် လူထုအားနဲတွန်းလှန်ရမယ်။ - သတ်မှတ်ရက်တစ်ခုပေးချိန်မတိုင်မှီအပြီးတည်ဆောက်ပါ၊ ချိတ်ဆက်ပါ၊ ပြင်စဉ်ပါ၊ နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေး လက်ဦးမှု ရှုတ်ထွေးမှု မဖြစ်ပေါ်စေရန် ကြိုတင်ဟန့်တားမှု၊ ဆွေးနွေးမှုများ၊ အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်များ ပြင်စဉ်ထားကြရမယ်။ - လက်ရှိ သဘောတူ ဆွေးနွေးထားပြီးသော အင်အားစုများမှာ - လူငယ်မျိုးဆက်များ၊ ကျောင်းသူ-သားများ၊ ရဟန်းသံဃာများနှင့်အစိုးရ၀န်ထမ်း၊ ပြည်သူ့ရဲ၊ တပ်မတော်အရာရှိအချို့ဖြစ်တယ်။ - ဆက်သွယ်ရေးတပ်စဉ်ထားပြီး အင်အားစုများမှာ - ရန်ကုန်၊ အထက်မြန်မာပြည်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ထားဝယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းတို့ဖြစ်တယ်။ - အဖွဲ့အစည်းများမှာ - မစိုးရိမ်တိုက်၊ အဖွဲချုပ်လူငယ်၊ Generation Wave၊ Justic၊ မြေသြဇာ၊ ဗ.က.သ ၂၀၀၇၊ ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊ ကွမ်းခြံကုန်းဘုန်းကြီးထု၊ ကယ်ဆယ်ရေးအင်အားစုများ၊ လူထုကြီးကြပ်ရေး၊ ဗဟန်း- ဗာဂရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်၊ တာဝကျောင်းသားများ၊ စုစုပေါင်း ဦးဆောင်အင်အား (၃၅၀) ခန့်ရှိပြီးဖြစ်တယ်။ - ၀န်းရံအားအဖြစ် ၈၈မျိုးဆက်ဟောင်းတွေ၊ ၇၄မျိုးဆက်ဟောင်းတွေ၊ ၆၂မျိုးဆက်ဟောင်းတွေ ရှိနေတယ်။ - ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေခြင်းကိစ္စရပ်များမှာ လူသစ်များစည်းရုံးရေး၊ လူထုကြားလှုပ်ဆော်ရေး၊ အသိအမြင် နှိုးကြားရေး၊ အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ် နားလည်ရေး၊ စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရေး၊ တပ်မတော်သားမိသားစုများ ပါဝင်ဆင်နွဲရေး အဓိကထားဆောင်ရွက်နေတယ်။ - ပြီးမြောက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အချိန်ရာထားချက် - သြဂုဏ်လဆန်းပိုင်း လူထုအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်၍ စစ်အာဏာရှင်စံနစ် အုပ်ချုပ်ရေး ရပ်တန့်နိုင်သည့်အထိ တဆင့်ခြင်းမြှင့်တင် တိုက်ပွဲဝင်မယ်။ - (ပုန်းခိုခြင်းအချိန်မရှိတော့ပြီ) တစ်ဦးဖမ်းခံရလျှင် နိုင်ငံသားတိုင်းလိုက်လံတောင်းဆိုရမယ်။ - ခေါင်းဆောင်သည် မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် မည်သူမည်ဝါအား စောင့်ဆိုင်းတော်လှန်ခြင်းမပြုရ။ - ပြတ်သားသော လူငယ်ကျောင်းသားများ၊ ရဟန်းသံဃာများ၊ တပ်မတော်သားများ၊ ဦးဆောင်မှုဖြင့် တော်လှန်မယ်။ - ဖြစ်ပေါ်လာသော လူထုကိစ္စ၊ ပြဿနာတိုင်းသည် တော်လှန်ရေး၏ လက်နက်သဖွယ်ဆုတ်ကိုင်နိုင်ရမယ်။ - ခေါင်းဆောင်ဆိုသူများ၏ အမိန့်စောင့်ဆိုင်းရန် မဟုတ်၊ မိမိတို့ ရဲရင့်သူများ ဦးဆောင်သောတိုက်ပွဲ ဖြစ်တယ်။ - ဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်သူတိုင်း တော်လှန်ရေးဦးဆောင်သူတွေဖြစ်တယ်။ - တိုင်းပြည်နဲလူမျိုးအတွက် အမျိုးသားရေးတာဝန်တရပ် ရဲရဲဝင့်ဝင့်ထမ်းဆောင်တာဖြစ်တယ်။ - စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံရမယ်၊ သီးခံစွမ်းရည်မြှင့်မားရမယ်၊ ဆွေးနွေးရှင်းပြနိုင်ရမယ်။ - ကိုယ်ကျင့်သီလတရားပြည့်ဝရမယ်။ လုပ်ရပ်နဲသက်သေပြရမယ်။ ဒါတွေဟာ ငါတို့ရဲ့ တာဝန်နဲဝတ္တရား၊ လုပ်ငန်းစဉ် နအဖ စစ်အာဏာရှင်လူတစ်စုဘာတွေလုပ်နိုင်ချေရှိလဲ? - ဖမ်းဆီးပိတ်ဆို့မယ်၊ ရိုက်နှက်ခြိမ်းချောက်မယ်၊ သတ်ဖြတ်ချေမှုန်းမယ်၊ ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်မလဲ? တချက်လောက် ခေါင်းအေးအေးထားပြီး စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ - ထောင်တွေပြည့်သွားမှာပေါ့ (ရဲရင့်သူ လူငယ် တစ်သောင်းလောက်ရန်ကုန်မှာ လှုပ်ရှားပြီး၊ နိုင်ငံအ၀ှမ်း လူဦးရေ ငါးသောင်းလောက်ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်…)။ - ဖိနှိပ်မှု လုပ်ဆောင်ပေးရမယ့် ၀န်ထမ်းတွေ၊ ပစ်ခတ်ရမယ့် စစ်သားတွေ၊ ဝိုင်းရိုက်ရမယ့် ကြံဖွတ်၊ စွမ်းအားရှင်၊ လှုံထိန်းတွေ၊ (အလုပ်မဆင်းခဲကြရင်၊ မိမိအိမ်မှာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုနဲရပ်တည်နေကြရင်၊ ခွင့်ယူထားကြရင်) - အမိန့်ပေးမယ့် ထိပ်ဆုံးကလူတစ်ယောက်၊ပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်၊ ဗိုလ်မှုးတစ်ရာ၊ တစ်ထောင်နဲ့ (ထောင်၊သောင်း၊သိန်းချီနေတဲ့ လူထုကို) ဘယ်လိုဖိနှိပ်နိုင်မှာလဲ? - (ပစ်ခတ်လက်နက် ရှိယုံနဲ့ ကျည်မထွက်ပါဘူး) တပ်မတော်သားတွေဆုံးဖြတ်ရမယ့် နောက်ဆုံးအချိန်ပါ။ တိုက်ပွဲအတွက်ခောက်အဆက်ဆက်ရင်းနှီးခဲကြတဲ့ သူရဲကောင်းတွေ သောင်းချီနေပါပြီ၊ တကြီမ်တစ်ခါ ပြတ်ပြတ်သားသား အရင်းအနှီးကြီးကြီးပေးရဲတယ်ဆိုရင်၊ ငါတို့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ရောက်မှာသေချာတယ်။ ပေးဖို့အစဉ်သင့်ပြင်ကြရမယ်။ အဓိကလိုအပ်တာက မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်မာမှုဖြစ်တယ်။ ဒါကလဲ အတွေးရှင်းရင် အလုပ်ရှင်းရှင်း ဆောင်ရွက် နိုင်တယ်။ မိမိကိုယ့်ကို (ငါတို့ကိုယ်ငါတို့) ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။ ရဲရင့်သူတွေအတွက် အောင်ပွဲရှိတယ်။ တိုက်ရဲသူတွေ အတွက် ပန်းတိုင်ရှိတယ်။ သေသွားတဲ့ အာဇာနည် သူရဲကောင်းတွေအတွက် ဗီမှန်ရှိတယ်။ သွေး၊ချွေး၊ဘ၀ ပေးဆပ်စွန့်လွှတ်သူတွေ အတွက် သမိုင်း မှတ်တမ်းရှိတယ်၊ တိုင်းရင်းသား မိဘပြည်သူလူထုအတွက် အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်ရှိဖို့ ငါတို့ရဲဝင့်စွာ တော်လှန်ကြစို့! ကိုညီ တော်လှန်အင်အားစုများကိုယ်စား ရန်ကုန်မြို့ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ "Success is the ability to go from failure to failure without losing your enthusiasm." Sir Winston Churchill
Posted by kyaw kyaw naing at 12:24 PM0comments
Posted by kyaw kyaw naing at 12:21 PM0comments
NLD လွတ်မြောက်နယ်မြေဖွဲ့ စည်းခြင်း
8888 people power news bulletin(2) - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: 8888 people power news bulletin(2)
Posted by အာဇာနည် at 11:41 AM0comments
Posted by အာဇာနည် at 10:50 AM0comments
အသိတရားခေါင်းပါးလှသော ခေါင်းဆောင်များ လက်အောက် က တိုင်းပြည်
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 9:52 AM0comments
English-Translated Manga on Nobel Winner Suu Kyi
Mizuha Akazu's 1994 manga on arrested activist re-published in Thailand
The publisher Negibose Thailand has translated and released Aung San Suu Kyi: Tatakau Kujaku (Aung San Suu Kyi: The Fighting Peacock),aJapanese manga that profiles the Nobel Peace Prize-winning democracy activist Aung San Suu Kyi. Suu Kyi's National League for Democracy won the 1990 national elections in the southeast Asian country of Burma (now Myanmar).
However, before Suu Kyi could assume the post of Prime Minister, the military government nullified the election and put her under house arrest. Suu Kyi has spent 13 of the last 18 years under house arrest or in prison. She won the Nobel Peace Prize in 1991 for her efforts, and her fellow Nobel Prize winners and democracy activists continue to push for her release.
Mizuha Akazu drew the manga as part of Oakla Shuppan's series on Nobel winners in 1994. The manga has been been out of print for years in Japan, and it has never been released in English until Negibose Thailand picked up the title. The manga was published this month to mark Suu Kyi's 63rd birthday, and The Irrawaddy,aThai news magazine created by Burmese journalists in exile, is hostingaPDF version for US$3.00 for individuals or for US$30.00 for organizations. (Irrawaddy staffer Neil Lawrence translated the manga.)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 6:41 AM0comments
Made in Myanmar' still on shelves
29 June 2008, 13:29
Consumers withaconscience, beware: clothing made in "Myanmar" - the country known as Burma until its name was changed by its oppressive military regime - is still to be found on the shelves, notably at Mr Price and Pick n Pay.
According to the International Labour Organisation (ILO), an estimated 800 000 people are forced labourers in Burma.
A visit by The Sunday Independent toaPick n Pay and toaMr Price at Campus Square shopping centre, in Auckland Park, Johannesburg, this week uncoveredanumber of fleecy and other kinds of jackets in both stores labelled "Made in Myanmar".
The Sunday Independent visit followedacall fromareader who said he was aghast at seeing that the fleecy jacket he wanted had been made in Myanmar.
Both Mr Price and Pick n Pay said they had cancelled their contracts with Burmese manufacturers and that the garments still on the shelves were "old stock" that was "still working its way through the system".
"Once these clothes are sold, there will be no more on the shelves," said Steve Ellis, joint managing director of the Mr Price group.
And Michael Coles, Pick n Pay's chief of clothing, said: "We gave notice two or three months ago to our Myanmar factory. We won't be selling any more clothes from there."
But Graham Bailey, of the Free Burma Campaign, said: "One doesn't want to cast unnecessary aspersions on such well-known South African companies, but it seems to me that they're telling lies.
"It was about seven months ago, when the fuss blew up about Gary Player's golf course in Burma, that these companies distanced themselves from selling clothes from Myanmar and said they weren't going to do it any more. They said then that they would stop and would cancel all orders. But they haven't.
"I have to believe that responsible and experienced retailers know exactly what orders they have in the pipeline. I also don't think it takes six months for the ships carrying those clothes to reach these shores. This is just evasion."
There is no South African government embargo on goods from Burma - though there are United States and European Union embargoes - "so there's no law against us importing clothes made in Myanmar", said Pick n Pay's Coles.
"But we have received many calls from the public, who said they were 'horrified', and we have ceased placing orders. There are still some goods on the water, but what you see in the shops are the last of our winter orders and everything ought to be gone by September."
"Maybe South African businesses have to start beingabit more moral," said Bailey.
Burma has been ruled by military regimes uninterruptedly since 1962. In May 1990, the regime held free elections for the first time in almost 30 years and the National League for Democracy, the party of Nobel Prize winner Aung San Suu Kyi, who is still under house arrest, won 392 of the 489 seats. But the military annulled the election.
In November 2006, the ILO announced that it would try to prosecute members of the junta at the International Court of Justice for "crimes against humanity", including the continuous forced labour of citizens imposed by the military.
Some global corporations have been criticised for profiting from the dictatorship by financing Burma's military junta.
World governments remain divided on how to deal with it. The United Kingdom, US and France have called for further sanctions, but China has opposed their proposals.
Last month, Cyclone Nargis devastated the country. Winds of up to 215 km/h hit the densely populated, rice-farming Irrawaddy Delta. Recent reports estimate that more than 130 000 people are dead or missing. But, in the following days, Burma's regime delayed the entry of United Nations aircraft carrying medicine, food, and other supplies.
The junta also rejectedaUS offer to provide assistance, though on May 13 the first US military transport aircraft was allowed to land, bringing 14 tons of medical supplies, mosquito nets and blankets.
The government's failure to permit the entry of international relief was described by the UN as "unprecedented".
* This article was originally published on page3of The Sunday Independent on June 29, 2008
Posted by အာဇာနည် at 12:20 AM0comments
မြန်မာ့ သတင်းဇွန်လ ၂၉ ရက် ၂၀၀၈။
Animal Disease Outbreak in Irrawaddy Delta
Amnesty Warns of Rights Violations in Malaysia
One blood, one voice, one command [News analysis]
Pay money, get electricity post Nargis: Rangoon resident
Animal disease outbreak in Irrawaddy Delta –
UNSC needs to shoulder responsibility of Burmese women
Weekly business roundup -
Diarrhea afflicts over 150 refugees, two children die
NLD member in prison not allowed medical treatment
Burma and Afghanistan increase opium production: UNODC
Southeast Asia body key to prising open Myanmar -
Solo female protester arrested
Junta denies medical treatment to detained student activist
Shwe Mann: Soon to be Burma
Burma agency makes donor plea
Merck Frosst and its employees combine their efforts to help the China and Myanmar disaster victims
Myanmar Refugees Resettlement Crosses 30,000
Myanmar again to take severe action against vehicles with stickers
Myanmar confirms detention of 14 Suu Kyi supporters
Bangladesh offers to settle core issues with Myanmar
Thousands in Delta Told to Relocate
Campaign to Stop Child Labor Kicks Off
Thai PM Likely to Survive No-confidence Vote
G-8 Nations Pledge Continued Aid for Burma
Oil and Global Credit Worries Drive Asian Currencies Down
G8 call on Burma to improve position
Burma blocks telecoms help
Hollywood stars launch campaign to pressure junta
Flash mob for Burma hits London
Burma cyclone survivors suffer food shortage -
TSF withdraws from Burma after junta restricts movement
Four Burmese athletes to join Olympic Games
New curriculum excludes general Aung San - Naw Say Phaw
Junta’s drug control claim irrelevant to ground situation: Researcher -
Bush discusses Burma with UN Ambassadors; Lalit K Jha
Cambodian Political Parties Begin Election Campaigning
Tibet Open to Foreign Tourists Again
Anti-drug campaign by Kachin students
MSF draws attention to need for clean drinking water for cyclone survivors
"Lightning" strike brings help to cyclone survivors
Myanmar seizes over 100 kg heroin
Myanmar to strive for realizing poppy-free target by 2014
Divers Find only Bodies in Capsized Philippines Ferry
Reporter arrested for covering cyclone news - Nem Davies
Poet remanded to custody for jeering at junta supremo - Phanida
Myanmar retires top military officers, reshuffles 150 staff
China offers rare praise for Myanmar’s drug fight - Ben Blanchard
Pitt, Clooney and Damon push for Cyclone Aid -
RM2 Million in medical aid sent to Myanmar
No more aid through Junta: US House -
Six Myanmar athletes to compete in Beijing Olympics
Preliminary findings of post-Nargis joint assessment confirm need for continued relief assistance
63rd Birthday of Aung San Suu Kyi ; Celebrating yet another Birthday Alone
More than 30,000 Myanmar refugees resettled from Thailand in world
Posted by အာဇာနည် at 10:44 PM0comments
* Posted on Wed Jun 25, 2008 8:30PM EDT
- A Washington woman was sentenced on Wednesday to two years in prison and five years of supervised release for her role in an Internet counterfeit check scheme.
The U.S. Postal Service recently sent 15 postal investigators to Lagos, Nigeria, and duringathree-month period there, they helped intercept counterfeit checks, lottery tickets and eBay overpayment schemes withaface value of $2.1 billion, Chris Siouris,acyber investigator at the U.S. Postal Inspector, said at the recent conference. Siouris, McKenna and others are pushing for ways to better educate Internet users so that people don't unwittingly help out in these kinds of e-mail scams .
ဆက်လက် ပျံသန်းနေဆဲ..ခွပ်ဒေါင်းနီအလံတော်..(အိုဟိုင်းယိုး ပြည်နယ်)
Posted by အာဇာနည် at 10:07 PM0comments
နအဖ ကာကွယ်ရေးဦးစီးဌာန အမိန့်ကြေငြာ ထုတ်ပြန်စာတမ်း
Posted by kyaw kyaw naing at 8:45 PM0comments
မြန်မာပြည် စစ်ကျွန်ဘ၀က လွတ်မြောက်ဘို့ ပေးဆပ်ခဲ့ကြရတာ အာဇာနည်တွေလည်းမနည်းတော့ပါဘူး ၊ သင်ရော သူတို့လို သတ္တိရှိပါသလား ပေးဆပ်ရဲပါသလား ...ကဲ..ဘယ်သူတွေ ပေးဆပ်ကြမလည်း ?????
Posted by kyaw kyaw naing at 7:37 PM0comments
သာသနာမောဠိအဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှုး ဆရာတော် ဦးဥတ္တရ ဂျပန်သွားပြီ။
Posted by အာဇာနည် at 7:22 PM0comments
၂၀၀၈ခုနှစ်ဇွန်လတွင် နအဖစစ်တပ်အတွင်းပြောင်းလွှဲတာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် အရာရှိများစာရင်း
Change Military (2008 June) - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: Change Military (2008 June)
Posted by kyaw kyaw naing at 7:08 PM0comments
Karen National Union (KNU) Statement
KNU Statement - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: KNU Statement
Posted by အာဇာနည် at 2:43 PM0comments
စစ်အာဏာရှင်စံနစ်တိုက်ဖျက်ရေး တော်လှန်မှုတစ်ရပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့၊ လုပ်ဆောင်ကြဖို့၊ တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့၊ စစ်အာဏာရှင်စံနစ် ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုနားလည်ထားလဲ အနည်းငယ်တင်ပြကြည့်ပါမယ်။ စံနစ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အကျယ်တပွင့်တင်ပြရရင် ပြည်သူ လူထု နားလည်နိုင်တယ်၊
အချို့တင်ပြချက်တွေကြောင့်လဲ ရှုတ်ထွေးသွားနိုင်တယ်၊ ရှင်းပြတာ နားမလည်ရင် စိတ်ပျက်သွားနိုင်တယ်၊ ဒီတော့အလွယ်ဆုံး ကျနော်တို့အင်အားစုတွေ နားလည်ထားတဲ့ ဥပမာပေးပြီး၊ လူထုလက်တွေ့ဘ၀နဲ့ အနာဂတ် မျှော်လင့်ချက်ကြား အနီးစပ် ဆုံးဖြစ်အောင် တင်ပြကြည့်ရမယ်ဆိုရင်- လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်ကြသူ တိုင်း ခံစားချက်တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောရင် ပြဿနာ ဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့ အတွေးဝင်နေကြတယ်၊ ရှင်းရှင်း နေနိုင်ရင် ချမ်းသာမှုရတယ်၊ ဒီအုပ်ချုပ်သူတွေနဲသွားပြီး မပတ်သက်ရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်၊ ကိုယ်နှင့် မဆိုင်ရင် ၀င်မပါနဲ၊ ကိုယ့်မိသားစုအရေးထက် ကျန်တာဘာမှ အရေးမကြီးဘူး၊ လွတ်မြောက်လိုချင်ရင် နိုင်ငံခြား ထွက်နိုင်အောင် ကြိုးစား၊ ဖိနှိပ်မှုကင်းချင်ရင် ကြံဖွတ် စွမ်းအားရှင်အဖြစ် ရပ်တည်ရှင်သန်လို့ရတယ်၊ အမှန်ကို ပြောနေတာလား၊
ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ၊ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေ၊ နားလည်နိုင်လောက်တဲ့ စွမ်းရည်မဲ နေကြပြီ၊ လူထုတစ်ခုလုံး အနေနဲလုံးဝမသိလို့တော့ မဟုတ်၊ တွန်းလှန်ရင် လက်ရှိ မိမိတို့ ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ ဘ၀ပျက်သွားလိမ့်မယ် စတဲ့အတွေးပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်လာအောင်၊ အကြောက်တရားအောက်မှာ လုပ်သင့်တာ လုပ်ချင်တာ မလုပ်ရဲအောင်၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးယုံကြည်ချက်တွေပျက်ပြား အောင် (ယုံကြည်မှု မရှိတော့ဘူး)၊
မိမိကိုယ်ကိုလဲ ပြည့်ဝတဲ့ယုံကြည်မှု မရှိလာအောင်၊ အသိတရားခေါင်းပါးလာအောင်၊ ကိုယ်ကျင့်တရား ဖောက်ပြန်လာအောင်၊ အမှားများများလုပ်ပြီး ဘ၀ရပ်တည် ရှင်သန်ရဲလာအောင်၊ နည်းအမျိုးမျိုးသုံးပြီး ဖိနှိပ်လိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စစ်အာဏာရှင်စံနစ်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေလို့ ခေါ်ယူလိုရပါတယ်။
(စစ်အာဏာရှင်စံနစ်ဆိုတာ အထက်ပါအခြေအနေတွေ ဖြစ်အောင်ဖန်တီး၊ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ထားတဲ့စံနစ်ပါ) နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စား တက်ကြွ သူများ ပြောနေတာတွေကို နားလည်တဲ့လူထုရှိသလို၊ နားမလည်နိုင်တဲ့ လူထုလည်း ရှိနေသေးတယ်၊ နားလည်တဲ့အဆင့်နဲရပ်နေတာကြောင့် တော်လှန်ရေးမဖြစ်သေးတာပါ၊ မဖြစ်တော့ဘူးလို့ ပြောမရပါဘူး၊
သို့သော်ယောင်လည်လည်ဦးဆောင်မှု လှုပ်ဆော်မှု ဟန်ပြစည်းရုံးရေး၊ ပါတီအနိုင်ရရှိရေး၊ အာဏာ တည်ဆောက်ရေး၊ စီမံချက်(ကိန်း) ဆက်လက်ရရှိရေး၊ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ တင်ပြသုံးသပ်ရေး၊ နေရာ-ရာထူး တည်မြဲရေး၊ လွမ်းမိုးချယ်လည်ရေး၊ စတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေနဲ တော်လှန်ရေးတစ်ရပ်ဖန်တီးလို့ မရပါဘူး။ ယနေ့ တော်လှန်ရမှာက စစ်အာဏာရှင်တို့ဖန်းတီးခဲတဲ့ လုပ်ရပ်၊ တည်ဆောက်ပေးခဲတဲ့ လွဲမှားတဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ ဖောက်ပြန်တဲ့ အကျင့်စာရိတ္တတွေကိုဦးစွာတော်လှန်ရမှာဖြစ်တယ်၊
ဒါကလူပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ခိုက်တော်လှန်ရေးမဟုတ်၊မိမိနဲမိမိပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ဦးစွာစတင်ပြီး မှန်ကန်အောင် လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်၊ တော်လှန်ရေး တစ်ရပ်ဖန်တီးရမှာဖြစ်တယ်၊ လူထု ၅၅သန်းကျော် အားလုံးပါဝင် လာ အောင် စည်းရုံးသိမ်းသွင်း တည်ဆောက်မှ စစ်အာဏာရှင် စံနစ်ကိုတွန်းလှန်နိုင်မယ်လို့ ခံယူထားရင် တော့မှား လိမ့်မယ်။
ယနေ့အချိန်အခါ အခြေအနေ၊ လူအင်အား၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ပါတ်ဝန်းကျင်၊ လက်ခံနိုင်မှု၊ ပါဝင်နိုင်မှု၊ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အမျိုးမျိုးအကြံ ပေးနေကြသလို၊ နည်းနားပေါင်းများစွာ လေ့လာရင်း အချိန်ကုန်မနေကြဖို့လဲလိုပါတယ်။
နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံတွေ၊ တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြား ဆွေးနွေးတိုင်ပင် စည်းဝေးဆုံးဖြတ် ချမှတ်တည်ဆောက် ခဲတဲ့လမ်းစဉ်တွေ၊ ခေါင်းဆောင်ကြီးများစွာ ခေါ်ယူကျင်းပခဲတဲ့ညီလာခံတွေ၊ ရေးဆွဲခဲကြတဲ စီမံကိန်း၊ လှုပ်ရှားမှု၊ လုပ်ငန်း စဉ်တွေ၊ နိုင်ငံတစ်ကာအသိုင်းအ၀န်းမှာ လိုက်လံစည်းရုံး လှုပ်ဆော်ခဲတဲ့ အလုပ်အဖွဲတွေ၊ ယနေ့ထက်တိုင် ထောက်ပံကူညီ ပန့်ပိုးနေတဲ့ အသင်းအဖွဲ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိနေလျက်နဲ နအဖဘာကြောင့် ဆက်လက်ရှင်သန် ဖိနှိပ် အုပ်ချုပ်နေရတာလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ၊ တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားနေသူတွေ၊ ပါတီဝင်တွေ၊ တိုင်းရင်းသား ခေါင်ဆောင်ကြီးများနဲ မိသားစုဝင်တွေ၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ လူထုလူတန်းစား အလွှာ အသီးသီးက မိဘပြည်သူတွေ၊ ကျောင်းသူ-သားတွေ၊ အခြေခံ နေစားအလုပ်သမားတွေ၊ တပ်မတော်သားတွေ၊ ကြံဖွတ်၊ စွမ်းအားရှင် အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေ၊ စီးပွားရေးသမားတွေ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာဝန်ထမ်း၊ ဆရာ-ဆရာမ တွေ၊ လက်ရှိနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ် ဂဃနဏသိကြလား၊ သိဖို့အခြေအနေပေးလား၊
နိုင်ငံသူ-သားတိုင်း သိရင်ကောင်းတယ်၊ သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲရှိတယ်၊ မသိဘဲနဲ့ တော်လှန်ရေးထဲ မပါနိုင်ဘူးလား၊ သေချာတာကတော့ တော်လှန်သူ၊ ရဲရင့်သူတွေ၊
ရှိရင် တော်လှန်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။
ညီညွတ်ကြ စည်းရုံးကြ တော်လှန်ကြ တိုက်ပွဲဝင်ကြလို့ ပြောခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ နအဖ အကျဉ်းစခန်းထဲ ချုပ်နှောင်မှု ခံထားကြရတယ်၊
အဲဒါစုစုပေါင်း ၂၀၀၀ကျော်သော ဆန့်ကျင်ရဲသူတွေသာဖြစ်တယ်၊ ကျန်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ ကတော့ ပေါ့ပါးတဲ့တာဝန်ယူမှုတွေနဲ ကျေနပ်နေကြတယ်၊
ဒါကြောင့် တော်လှန်ရေး မဖြစ်တာဆိုပြီး လက်ခံထားသူတွေ ရှိနေပြီ၊ နယ်စပ်နဲနိုင်ငံတစ်ကာမှာရောက်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင် တိုက် ဖျက် ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး၊ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှု လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ အမည်ခံခေါင်းဆောင်တွေ၊ အမည်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါလား၊
အကျဉ်းကျနေတဲ့ မျိုးဆက်လူငယ်တွေရဲ ပြတ်သားတဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ရဲတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲစွမ်းအား လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေကိုကြည့်ပြီး အားရ၊ ဂုဏ်ပြု နေယုံတင်မဟုတ်၊ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်ရဲတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာအောင် ဘာလို့ မလုပ်တာလဲ မတည်ဆောက် ကြတော့ဘူးလား၊
ဒီတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ လူထုကိုဘာလုပ်လိုက် ညာလုပ်လိုက်လို့ ပြောနေတာ၊ (သို့) ပြည်ပမှာ မှေးနေပြီး၊ အာသာပြေနိုင်ငံ့အရေး လုပ်ပေးနေတာလောက်နဲ၊ နအဖ စစ်အစိုးရမပြုတ်ကျနိုင်ဘူးလို နားလည်ဖို့ အချိန်ရောက်နေပါပြီ။
"စစ်အာဏာရှင်စံနစ်ကိုလူထုအားနဲအမြစ်ပြတ်တော်လှန်ကြလို့" ပြောခဲကြတဲ့ ၈၈မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင် ကိုဌေးကြွယ်တို့ ထောင်ထဲရပ်တည်နေခြင်းဟာ စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးနဲအမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အတွက်ဖြစ်တယ်။
လှိုင်းတစ်ခုလို မြစ်တစင်းလို တော်လှန်လာမယ့် လူငယ်တွေရှိနေပါတယ်၊ ကန့်လန့်လုပ်ပြီး စောင့်ဆွဲနေတဲ့ ဟန်ပြနိုင်ငံရေး လုပ်နေသူများ ရပ်တန်းကရပ်ဖို့ သင့်ပါတယ်။ ယောင်တောင်တောင်ပြောနေကြယုံနဲ စစ်အာဏာရှင်အမြစ်မပြတ်၊ ပြတ်သားတဲ့ လုပ်ဆောင်မှု လူထုရှေ့ရပ်တည် ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ တော်လှန်ရဲသူတွေနဲ့သာ တိုင်းပြည်ကို လားရာကောင်းတဲ့ ပြောင်းလဲမှုဆီ သယ်ဆောင် သွားနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
ဘယ်လို လူထုပါဝင်လာအောင် ရှင်းပြရမှာလဲ၊ အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ လူထုကိုရှင်းရမှာက - စစ်အာဏာရှင် စံနစ်အမြစ်ပြတ်တွန်းလှန်ပြီးရင်၊ မိဘပြည်သူလူထုရရှိမယ့် လက်တွေ့ရလဒ်ကတော့ နိုင်ငံသားတိုင်း အလုပ်ရရှိမယ် (မိမိစွမ်းရည်၊ပညာ၊လုပ်ဆောင်မှု၊တပ်ကျွမ်းမှုနဲထိုက်တန်တဲ့)၊ ၀င်ငွေနဲ့ မျှတတဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စံနစ်ရှိစေရမယ်၊
သက်ကြီးရွယ်အိုများ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအတွက် လူမှု အထောက် အကူပြုစံနစ် ရှိစေရမယ်၊ ဒီတော့ လတ်တလော အကျိုးခံစားရမှာကလူထုဖြစ်တယ်၊ (ဘယ်ပါတီဝင်၊ ဘယ်အဖွဲဝင်မှမဟုတ်ပါဘူး) အမုန်းဒေါသဖြစ်နေရတဲ့ လူထု၊ အကြောက်တရားနဲအသက်ရှင်သန်ခဲ့ရတဲ့ လူထု၊ လွတ်လပ် မှု-တရားမျှတမှုမဲ့နေခဲ့ရတဲ့ လူထုဘ၀တွေကနေ လွတ်မြောက်ကြဖို့ တော်လှန်ရေးကို ရက် (၉၀)အတွင်း အကောင် အထည် ဖော်မှာဖြစ်တယ်။
ပြည်သူလူတစ်ရပ်လုံးပါဝင်တဲ့ စစ်အာဏာရှင် ပြုတ်ကျရေး၊ လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှု ငါတို့ အင်အားစုတွေနဲ့အတူ - ရက်၉၀အတွင်း တိုက်ပွဲပြင်ကြ၊ တိုက်ပွဲဝင်ကြ၊ စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျသည်အထိ ငါတို့ အသက်စွန့် ဘ၀ပေး တော်လှန် တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုတာ ဂတိပြုလိုက်တယ်၊ တိုက်ပွဲဝင်ရန် တော်လှန်ရန် ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။
- အနုနည်း၊ နှလုံးရည်စွမ်းအား၊ အဓိကထားပြီးလုပ်ဆောင်ရမယ်။
- ပြည်သူလူထုကြား တည်တည်ကြည်ကြည် ရဲရဲဝင့်ဝင့် ရပ်တည်ရှင်းလင်းရမယ်။
- လူထုပါဝင်ရမယ့်အနေအထားသေချာ နားလည်သည်အထိ ဆွေးနွေးရမယ်။
- အစိုးရရုံး၊ ရဲဌာန၊ နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အဦးတွေက
- ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေက ထောက်ပံရေးဌာနတွေဖြစ်ရမယ်။
- စာသင်ကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်၊ အလုပ်ရုံ၊ စက်ရုံတွေက တော်လှန်သူစုရုံးရာဌာနတွေဖြစ်ရမယ်။
- လမ်း၊ တံတားတွေပေါ်မှာ တော်လှန်လူထုကြီး ပြည့်နှက်နေရမယ်။
- ဖိနှိပ်သူတို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်သွားရမယ်။
- နယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီတွေ မြို့ရွာတိုင်းမှာဖွဲစည်းရမယ်။
- သံဃာတော်တွေရဲ့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှုကို လူထုကလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်။
- နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုမှုထက် တော်လှန်ရေးအသွင်ဆောင်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ရမယ်။
- ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲစည်းရမယ်။ (တော်လှန်ဦးဆောင်သူ၊ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်၊
- နိုင်ငံတစ်ကာငြိမ်ချမ်းရေးတပ်တွေလိုအပ်ရင် ခေါ်ဆောင်ရမယ်။
- ဘုရားသား(ရဟန်းသံဃာများ)၊ တပ်မတော်သား(စစ်သားများ)၊
ကျောင်းသား(လူငယ်-ကျောင်းသူ-သားများ) ဦးဆောင်မှုဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ကာ
- သတ်မှတ်ရက်တစ်ခုပေးချိန်မတိုင်မှီအပြီးတည်ဆောက်ပါ၊ ချိတ်ဆက်ပါ၊
ပြင်စဉ်ပါ၊ နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေး လက်ဦးမှု ရှုတ်ထွေးမှု မဖြစ်ပေါ်စေရန်
ကြိုတင်ဟန့်တားမှု၊ ဆွေးနွေးမှုများ၊ အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်များ
- လက်ရှိ သဘောတူ ဆွေးနွေးထားပြီးသော အင်အားစုများမှာ -
လူငယ်မျိုးဆက်များ၊ ကျောင်းသူ-သားများ၊ ရဟန်းသံဃာများနှင့်အစိုးရ၀န်ထမ်း၊
- ဆက်သွယ်ရေးတပ်စဉ်ထားပြီး အင်အားစုများမှာ - ရန်ကုန်၊ အထက်မြန်မာပြည်၊
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ထားဝယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊
- အဖွဲ့အစည်းများမှာ - မစိုးရိမ်တိုက်၊ အဖွဲချုပ်လူငယ်၊ Generation Wave၊
Justic၊ မြေသြဇာ၊ ဗ.က.သ ၂၀၀၇၊ ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊ ကွမ်းခြံကုန်းဘုန်းကြီးထု၊ ကယ်ဆယ်ရေးအင်အားစုများ၊ လူထုကြီးကြပ်ရေး၊ ဗဟန်း- ဗာဂရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်၊ တာဝကျောင်းသားများ၊ စုစုပေါင်း ဦးဆောင်အင်အား (၃၅၀) ခန့်ရှိပြီးဖြစ်တယ်။
- ၀န်းရံအားအဖြစ် ၈၈မျိုးဆက်ဟောင်းတွေ၊ ၇၄မျိုးဆက်ဟောင်းတွေ၊
- ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေခြင်းကိစ္စရပ်များမှာ လူသစ်များစည်းရုံးရေး၊
လူထုကြားလှုပ်ဆော်ရေး၊ အသိအမြင် နှိုးကြားရေး၊ အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်
နားလည်ရေး၊ စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရေး၊ တပ်မတော်သားမိသားစုများ ပါဝင်ဆင်နွဲရေး
- ပြီးမြောက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အချိန်ရာထားချက် - သြဂုဏ်လဆန်းပိုင်း လူထုအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်၍ စစ်အာဏာရှင်စံနစ် အုပ်ချုပ်ရေး ရပ်တန့်နိုင်သည့်အထိ တဆင့်ခြင်းမြှင့်တင် တိုက်ပွဲဝင်မယ်။
- (ပုန်းခိုခြင်းအချိန်မရှိတော့ပြီ) တစ်ဦးဖမ်းခံရလျှင်
- ခေါင်းဆောင်သည် မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် မည်သူမည်ဝါအား စောင့်ဆိုင်းတော်လှန်ခြင်းမပြုရ။
- ပြတ်သားသော လူငယ်ကျောင်းသားများ၊ ရဟန်းသံဃာများ၊ တပ်မတော်သားများ၊ ဦးဆောင်မှုဖြင့် တော်လှန်မယ်။
- ဖြစ်ပေါ်လာသော လူထုကိစ္စ၊ ပြဿနာတိုင်းသည် တော်လှန်ရေး၏ လက်နက်သဖွယ်ဆုတ်ကိုင်နိုင်ရမယ်။
- ခေါင်းဆောင်ဆိုသူများ၏ အမိန့်စောင့်ဆိုင်းရန် မဟုတ်၊ မိမိတို့ ရဲရင့်သူများ ဦးဆောင်သောတိုက်ပွဲ ဖြစ်တယ်။
- ဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်သူတိုင်း တော်လှန်ရေးဦးဆောင်သူတွေဖြစ်တယ်။
- တိုင်းပြည်နဲလူမျိုးအတွက် အမျိုးသားရေးတာဝန်တရပ် ရဲရဲဝင့်ဝင့်ထမ်းဆောင်တာဖြစ်တယ်။
- စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံရမယ်၊ သီးခံစွမ်းရည်မြှင့်မားရမယ်၊ ဆွေးနွေးရှင်းပြနိုင်ရမယ်။
- ကိုယ်ကျင့်သီလတရားပြည့်ဝရမယ်။ လုပ်ရပ်နဲသက်သေပြရမယ်။ ဒါတွေဟာ ငါတို့ရဲ့ တာဝန်နဲဝတ္တရား၊ လုပ်ငန်းစဉ် နအဖ
- ဖမ်းဆီးပိတ်ဆို့မယ်၊ ရိုက်နှက်ခြိမ်းချောက်မယ်၊ သတ်ဖြတ်ချေမှုန်းမယ်၊
- ထောင်တွေပြည့်သွားမှာပေါ့ (ရဲရင့်သူ လူငယ် တစ်သောင်းလောက်ရန်ကုန်မှာ
လှုပ်ရှားပြီး၊ နိုင်ငံအ၀ှမ်း လူဦးရေ ငါးသောင်းလောက်ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်…)။
- ဖိနှိပ်မှု လုပ်ဆောင်ပေးရမယ့် ၀န်ထမ်းတွေ၊ ပစ်ခတ်ရမယ့် စစ်သားတွေ၊
ဝိုင်းရိုက်ရမယ့် ကြံဖွတ်၊ စွမ်းအားရှင်၊ လှုံထိန်းတွေ၊ (အလုပ်မဆင်းခဲကြရင်၊ မိမိအိမ်မှာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုနဲရပ်တည်နေကြရင်၊ ခွင့်ယူထားကြရင်)
- အမိန့်ပေးမယ့် ထိပ်ဆုံးကလူတစ်ယောက်၊ပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်၊ ဗိုလ်မှုးတစ်ရာ၊ တစ်ထောင်နဲ့ (ထောင်၊သောင်း၊သိန်းချီနေတဲ့ လူထုကို) ဘယ်လိုဖိနှိပ်နိုင်မှာလဲ?
- (ပစ်ခတ်လက်နက် ရှိယုံနဲ့ ကျည်မထွက်ပါဘူး) တပ်မတော်သားတွေဆုံးဖြတ်ရမယ့် နောက်ဆုံးအချိန်ပါ။
တိုက်ပွဲအတွက်ခောက်အဆက်ဆက်ရင်းနှီးခဲကြတဲ့ သူရဲကောင်းတွေ သောင်းချီနေပါပြီ၊ တကြီမ်တစ်ခါ ပြတ်ပြတ်သားသား အရင်းအနှီးကြီးကြီးပေးရဲတယ်ဆိုရင်၊ ငါတို့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ရောက်မှာသေချာတယ်။ ပေးဖို့အစဉ်သင့်ပြင်ကြရမယ်။ အဓိကလိုအပ်တာက မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်မာမှုဖြစ်တယ်။ ဒါကလဲ အတွေးရှင်းရင် အလုပ်ရှင်းရှင်း ဆောင်ရွက် နိုင်တယ်။
မိမိကိုယ့်ကို (ငါတို့ကိုယ်ငါတို့) ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။ ရဲရင့်သူတွေအတွက် အောင်ပွဲရှိတယ်။ တိုက်ရဲသူတွေ အတွက် ပန်းတိုင်ရှိတယ်။ သေသွားတဲ့ အာဇာနည် သူရဲကောင်းတွေအတွက် ဗီမှန်ရှိတယ်။ သွေး၊ချွေး၊ဘ၀ ပေးဆပ်စွန့်လွှတ်သူတွေ အတွက် သမိုင်း မှတ်တမ်းရှိတယ်၊ တိုင်းရင်းသား မိဘပြည်သူလူထုအတွက် အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်ရှိဖို့ ငါတို့ရဲဝင့်စွာ တော်လှန်ကြစို့!
Posted by အာဇာနည် at 1:47 PM0comments
Join Free Burma Chicago & US Campaign for Burma to CELEBRATE BURMA'S BELOVED IRON LILY AUNG SAN AUU KYI'S 63RD BIRTHDAY
PRO-DEMOCRACY LEADER OF 1990 ELECTION WINNING PARTY,
FOR 12 OF LAST 18 YEARS
SUNDAY, JUNE 22, 2008 2-5PM
AT NORA ROWLEY'S HOME
*38 6TH AVENUE,
CONDO UNIT B3
RSVP ASAP or Questions norarwl@aol.com, 708-522-6620
* LaGrange isasuburb near the western edge of Cook Cty, ~2miles East of 294 Tollway and ~4miles South of 290 Eisenhower Expwy. # Below isalink toaGoogle map of my neighborhood. I live in downtown LaGrange 1 block East of LaGrange Road/Manheim Rd and2blocks South of Ogden Ave/Rte 34.
Also, I live 1 block from the LaGrange Metra Train Station (shown on the Google map below) along the Burlington Northern/Aurora Metra Line from Union Station. Metra weekend passes are $5 and up to3children 11 yo and under can ride free with each fare paying adult.
Trains leave Chicago at 12:30pm and 2:30pm and arrive in LaGrange at 12:56pm and 2:56pm, respectively. Return trains leave LaGrange at 3:03pm, 5:03pm and 7:03pm and arrive in Chicago at 3:42pm, 5:42pm and 7:42pm, respectively.
မြန်မာ့သတင်း ဇွန် ၂၇ ရက် ၂၀၀၈
Rights activist says state-sanctioned rape widespread in Burma - Claudia Blume
Animal disease outbreak in Irrawaddy Delta - Saw Yan Naing
Southeast Asia body key to prising open Myanmar - Olivia Rondonuwu and Ed Davies
Thai Prime Minister Survives Parliamentary No-confidence Vote
Burma cyclone survivors suffer food shortage - Amy Kazmin
New curriculum excludes general Aung San -
Junta’s drug control claim irrelevant to ground situation: Researcher - Mungpi
Cambodian Political Parties Begin Election Campaign
Reporter charged with
ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ တားဆီးနေခြင်းကို ၀မ်းနည်းကြေ...
အသိတရားခေါင်းပါးလှသော ခေါင်းဆောင်များ လက်အောက် က တ...
နအဖ ကာကွယ်ရေးဦးစီးဌာန အမိန့်ကြေငြာ ထုတ်ပြန်စာတမ်း...
သာသနာမောဠိအဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှုး ဆရာတော် ဦးဥတ္တရ...
Join Free Burma Chicago & US Campaign for Burma to...
ဒီရေရောက်တော များ ထိမ်းသိမ်းပေးကြပါရန်
အရပ်ကူလို့လူဝိုင်းပေးကြပါ။ ကံဆိုးသူများကို.
News Hour: Two NLD women members were detained.
စစ်ခုံရုံးသာ ကြွခဲ့တော့ သန်းရွှေ
အပန်းလည်းပြေ..ငွေလည်း လာ လှုပါလေ..
A Taste of Myanmar Cultural Show July 19, 2008
ကဲ ပွဲ လန့် တုန်းမှာလာ..ခင်းချင်နေတဲ့ဖျာ
ပွဲ လန့် တုန်းမှာလာ..ခင်းချင်နေတဲ့ဖျာ
ရုရှားနဲ့ မြန်မာ နျူကလီယားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမ...
တစ်နေ့ မှာတော့ 
ဲမြန်မာသတင်းဇွန်လ ၂၆ ရက် ၂၀၀၈
UNICEF external situation report Myanmar cyclone N...
အလောင်းမြှုပ်ပုဒ်မနဲ့Myanmar Tribune အယ်ဒီတာ ကို...
မရှိတဲ့ ဂုဏ်ချိုးနှိမ်မည့် သူ မှန်သမျှ ဖမ်းပါသည် ခ...
ဒီတခါညီညွတ်မှ လူဖြစ်တော့မယ် -မိုဃ်းသွေး
ကမ္ဘာမှာ ငါကလွဲရင် ဘယ်သူမှ မတတ်
အုပ်ချုပ်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ ဘယ်သူ ရှင်းမလဲဒီကိစ္စ
နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ (၁) သိန်းခွဲနီ...
ဘာတွေကြောက်နေကြတာလည်းဟဲ့ ပြိတ္တာတွေ..ရှိ်သမျှ သာလို...
“The real disaster in Burma is the government”,
စိတ်ကောင်းရှိမှ..ဒို့ လိူရုပ်ချောမှာ သန်းရွှေ
မြန်မာအစိုးရ အနိုင်ရတဲ့..ကမ္ဘာ့ မှတ်တမ်းများ.
မြန်မာသတင်းဇွန်လ ၂၅ ရက် ၂၀၀၈
မနာလို မိုက်ရိုင်းထွားကျိုင်း နေကြသူများ။
သတ်မတော် လိမ်ညာ MRTV ကလွဲ၍ ဘာမှမကြည့် ရ
ရွှေ ဗမာပြည်က လွတ်လပ်မှု နှင့် အတရားဆုံးပုဒ်မ
ပြောတော့ နွားအိုက နာတယ်
တော်လှန်ကြဖို့အားအင်မွေးကြစို့ 
အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် မြန်မာနိူင်ငံ ၏ ကျေညာချက်...
သူ့ မြေးဘိန်းစားတော့ ကောင်းတယ်လား...
ပုလိပ်ရောဂါဆိုး၏ အန္တရာယ်က လက်တကမ်းမှာ...
Voice From Burma
မြန်မာ့သတင်းများ ဇွန်၂၃ ရက်
ကျွန်တော်တို့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ..ဒါလုပ်နေရတယ်.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၃ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ နယူးယောက်...
အမေရိကန် first lady လောင်း ၏မြန်မာပေါ်အမြင်
Myanmar helps cyclone-affected farmers resume farm...
နာဂစ်ကနေ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်လိုက်ပြန်တဲ့ နအဖ
Exile source said Senior General and vice senior g...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ မိန့် ခွန်းများ